कांग्रेसमा सभापति जित्न देउवा र पौडेललाई धौं, आफ्नै गुटका नेता धमाधम उम्मेद्वार घोषणा गर्दै – KhojPatrika
कांग्रेसमा सभापति जित्न देउवा र पौडेललाई धौं, आफ्नै गुटका नेता धमाधम उम्मेद्वार घोषणा गर्दै
खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ मंसिर ४, १८ :४३ बजे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा अहिले दाबी गरेका नेताहरु सबैले सभापतिमा उमेद्वारी दिएको खण्डमा १४ औं महाधिबेशन निकै रोचक बन्ने देखिन्छ । खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटोलाको गुटका नाममा पार्टीमा भागबण्डा हुँदै आएको थियो । तर, महाधिबेशन नजिकिदै गर्दा दुबै गुटका विश्वास पात्र मानिएका नेताहरुले नै आफूलाई सभापतिको दाबेदार बताउँदै देउवा र पौडेलको साथ छोड्दै जाँदा नेतृत्वको चुनावमा निकै टक्कर पर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिबेशनमा सभापतिको दावेदारका रुपमा शेरबहादुर देउवाले फेरि उमेद्वारी दिने तयारीमा छन् । तेह्रौ महाधिबेशनमा उनीसँगै भिडेर पराजित बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिमै उमे्दवारी दिन दौडधुप गर्दै छन् । देउवा र पौडेलको विश्वास थियो, उनीहरुलाई सभापतिको उमेद्वार बन्न गुटका नेताहरुले साथ दिन्छन् भन्ने । त्यहि भएर पनि देउवा र पौडेलले आ–आफनै गुटको छलफल र भेला महिनौ अघिदेखि बोलाइ रहेका छन् । तर, महाधिबेशन आउन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा समेत देउवा र पौडेल खेमाका नेताहरु आफै उमेद्वार भएको घोषणा गर्दै उनीहरुको साथ छोडेर हिड्न थालेका छन् । जसले देउवा र पौडेललाई चुनाव जित्न सकस पर्दै गएको छ ।
मंसिर २४ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरू हुने महाधिबेशनमा संस्थापन अर्थात देउवा पक्षको टिममा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठ त्यति धेरै नतातिएपनि निधि भने सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर चुनावी प्रचार–प्रसारमा जुटिसकेका छन् । श्रेष्ठलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने विश्वाससहित देउवाले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षमा पनि त्यस्तै किचलो छ ।
संस्थापनइतर भनिने समूहलाई आफनै नेतृत्वमा एकताबद्ध राख्नुपर्ने चुनौती पौडेल सामु छ । १३ औं महाधिवेशनमा पौडेललाई साथ दिएका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला तथा नेता डा. शेखर कोइराला आफैं सभापतिको प्रत्यासी भएको दाबी गर्छन् । पूर्वमहामन्त्री सिंहले पौडेल पक्षको बैठक नै बहिष्कार गरेर सभापति लड्ने तयारी थालेका छन् । पौडेल पक्षमा सहमति जुटाउने भन्दै अझै नेताहरु छलफलमा ब्यस्त छन् । तर, सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून छ ।
अर्कोतिर १३ औं महाधिवेशनमा सभापति लडेर तेस्रो धार बनाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला विस्तारित टिमसहित सभापति लड्ने तयारीमा छन् । आफनो गुट नै परिवर्तन गर्दै सभापतिमा दाबेदारी दिने तयारीमा रहेका नेताहरुले कांग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउँनुपर्ने हुँदा पहिलो चरणको चुनावमा सबै जना पहिलो वा दोस्रो बन्ने दाउ रचिरहेका छन् ।
ट्याग : #नेपाली कांग्रेस, #सभापतिमा उमेद्वारी